Wiilasha Jamaal Khaashuqji Oo Cafiyey Kuwii Dilay Aabbahood – somalilandtoday.com
(SLT-Riyadh)-Wiilasha suxufigii rer Sacuudi ee la dilay Jamal Khaashuqji ayaa sheegay “inay cafiyeen” kuwii dilay aabahood, hadalkaas oo taxliiliyayaasha ay ku macneeyeen mid si hubanti ah cafis ugu fidinaya shan qof oo lagu helay dilka, kuwaas oo iminka dil sugayaal ah.
Khaashquji, oo ahaa xog-ogaal ku dhow boqortooyada balse isu beddelay mid cambaareeya, ayaa lagu dilay kadibna jidhkiisa lagu jarjaray gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, bishi October ee 2018, kiiskaas oo si weyn u dhaawacay sumcadda dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan.
“Habeenkan barekeysan ee bisha Ramadan, haddii aan nahay wiilasha shahiid Jamaal Khaashuqji waxaan ku dhaawaaqeynaa inaan cafinay oo saamaxnay kuwii dilay aabahayo,” waxaa sidaas qoraal uu twitter soo dhigay ku yidhi Saalax Khaashuqji.
Mas’uuliyiinta Sacuudiga weli kama hadlin caqabadaha sharci ee ka dhalan kara hadalka Saalax, oo ku nool boqortooyada, kaasi oo beeniyey warar sheegaya inuu heshiis lacageed la galay dowladda.
“Waxa tani macnaheedu uu yahay ayaa ah in dilayaasha ay ka badbaadi doonaan ciqaabta dilka, maadaama shareecada Islaamka ay qeexeyso in qoyska ay leeyihiin xuquuqda cafiska,” waxaa sidaas qoraal twitter ku yidhi Ali Shihabi, oo ah qoraa iyo taxliiliye Sacuudiyaan ah oo ku dhow boqortooyada.
Saalax ayaa hore u sheegay inuu “kalsooni buuxda” ku qabo hanaanka cadaaladda Sacuudiga, wuxuuna cambaareeyey mucaarad uu sheegay inay ka faa’iideysanayaan kiiska.
Saalax ayaa ku gacan saydhay warbixintaas, isaga oo beeniyey inuu wax heshiis lacageed kala hadlay dowladda Sacuudiga